Bogga ugu weyn Sida Loo Ciyaaro Ciyaaraha Onlineka Ah Ee Bilaashka Ah Si Aad Lacag U Hesho
Qof kastaa wuxuu isticmaali karaa xoogaa lacag caddaan ah oo dheeri ah, laakiin helitaanka istaraatiijiyad ku habboon oo aad lacag ku kasbato wakhtiga firaaqada way adkaan kartaa.
Laakin, ma ogtahay in aad si fudud lacag ku kasban karto adigoo ciyaaraha online ka ciyaaraya? Haa, 100% waa suurtogal!
Arrinta xiisaha lihina waa in ay ka xiiso badan tahay inta aanad malaynayn.
Haddii aad jeceshahay ciyaaraha khadka tooska ah oo aad khibrad u leedahay ciyaarta iyo ku guuleysiga ciyaaraha khadka tooska ah, markaa waa inaad ka fikirtaa ciyaarista iyo helitaanka lacag si aad u sameyso waxa aad ku raaxaysato samaynta.
Maqaalkan, waxaan hoos ugu dhigay macluumaadka ku saabsan sida loo ciyaaro ciyaaraha tooska ah ee bilaashka ah si aad lacag u hesho.
Ma ku fekertay inaad lacag ku samayso ciyaaraha?
Had iyo jeer waa wax aad u xiiso badan in la ciyaaro ciyaaraha bixiya lacagta dhabta ah. Waa gunno dheeri ah oo loogu talagalay cayaartoyda inay gunno ku ciyaaraan ciyaaraha lacagta dhabta ah iyagoo ku faraxsan guryahooda.
Tani macnaheedu maaha inaad joojin doonto shaqadaada ama aad saacado aan la tirin karin gelin doonin ciyaaraha. Waa fursad aad ku raaxaysato adigoo waliba lacag ka helaya ciyaaro ciyaaraha bixiya lacag caddaan ah.
Barnaamijyo badan ayaa kugu abaalmariya ciyaaraha ama aad ku qabatid talefankaaga hawlo fudud, in kasta oo aanay kaa dhigi doonin taajir.
Qaar ka mid ah barnaamijyadan ayaa ku abaalmariya dadka isticmaala lacag dhab ah haddii ay isticmaalaan. Waxaa jira daraasiin ka mid ah barnaamijyadan la heli karo, qaar badan oo iyaga ka mid ahna waa khiyaamo cad oo shaki leh.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhowr la doortay oo aan ahayn kaliya sharci laakiin sidoo kale mudan.
Lacag ka samaynta ciyaarahan ma awoodi doonaan inay beddelaan shaqadaada wakhtiga buuxa, laakiin waxay kaa caawin karaan inaad lacag kaydsato si aad naftaada ula dhaqanto wax fiican.
Maqaalkan, waxaan kuu sheegi doonaa dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato ciyaaraha online-ka iyo inaad lacag ka samayso. Waxaan kuu sheegi doonaa abka aad soo dejisanayso inta aad ka samayn karto.
Hubi inaad akhrido maqaalkan ilaa dhamaadka maadaama uu noqon doono mid wax ku ool ah oo xiiso leh.
Goorma iyo sidee tahay inaad u ciyaarto ciyaaraha lacagta dhabta ah?
Xitaa haddii aad kaliya dhaafinayso wakhtiga adigoo sugaya ballan, waxaad ciyaari kartaa ciyaaraha internetka si aad u hesho lacag dhab ah.
Yaa aan jeclayn inuu sameeyo xoogaa lacag caddaan ah oo dheeri ah isagoo ciyaaraya ciyaaraha lacagta dhabta ah? Si fudud u ciyaar ciyaaraha lacagta ku siinaya oo ka caawiya balaadhinta lacagtaada.
Markaa bilow ciyaarista iyo ku guuleysiga lacag hadda. Maqaalkani kuma ballanqaadi doono $ 1000 toddobaad kasta, laakiin wuxuu ku wargelin doonaa ciyaaraha kala duwan ee lacag-samaynta.
Waxaa jira suurtogalnimo faa'iido leh oo ku jira dadaalka, maaddaama goobo kala duwan ay bixiyaan barkado abaal-marin oo kala duwan. Markaa hore u soco oo u ciyaar lacag dhab ah; aad ayey u qalmi doontaa waqtigaaga.
Akhri Sidoo kale: 17 Kaqeybgalka Cayaaraha Kaadhka ee loogu talagalay labo qof in ay ciyaaraan
Ciyaartoyda ma helaan Lacag caddaan ah oo dhab ah?
Haa, way sameeyaan! Tirada shirkadaha & apps-ka ciyaaraha ee bixiya lacagta dhabta ah waa mid aan dhamaanayn.
Ma garanaysaa waxa ugu wanaagsan? Waxay ku siinayaan fursad aad ku kasbato oo aad raacdo xiisahaaga ciyaaraha.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa ciyaar kaliya oo lacag ku bixisa khadka oo ku guuleysato.
Shirkadaha badankoodu waxay ku siiyaan PayPal. Haddii aadan mid lahayn samee koontada PayPal sababtoo ah waxaa jira qaar horeyba uga sameeyay Paypal 100 ilaa 2000 dollars maalintii.
XIDHIIDHKA: Lacag ku Bixiya Si Toos ah: Youtube, Twitch, Facebook
Ciyaaraha aad lacag ka heli karto
Waa kuwan ciyaaraha aad lacag ka samayn karto:
1. Erayada Maalka
Miyaad ku raaxaysataa ciyaarista ciyaaraha maskaxda sida wax-yaraanta, xoqista, ama ciyaaraha erayada? Haddi ay arintu sidaas tahay, waxa aad jeclaysan doontaa ciyaartan lacag samaynta sababta oo ah waxa ay bixisa lacag dhab ah hadii aad xariif tahay.
Ciyaarta ereyada online-ka ah ayaa shaki la'aan ah tan ugu fiican intarneedka hadda.
Waxaad ku guuleysan kartaa lacag dhab ah adigoo ciyaaraya ciyaarahan. Tani waa ciyaar aad ku kasban karto lacag dhab ah. Ciyaar internet ah oo lacag ku hesha.
Ma doonaysaa in aad ogaato waxa ka dhigaya ciyaartan online ka inteeda kale? Ciyaartan, oo ka duwan erayadii hore ee isdhaafsiga ahaa ee lagu heli jiray warqadaha kaliya, ayaa laga heli karaa khadka.
Play ciyaartan fudud ee lacag kasbashada dhabta ah si aad aqoontaada u tijaabiso. Qof kasta oo ka weyn da'da 18 waa lagu soo dhaweynayaa inuu ciyaaro.
Awoodda ciyaarta in lagu ciyaaro meel kasta ayaa kordhisay caan ka ah ciyaartoyda fursad u leh inay ku guuleystaan ​​​​ilaa $ 3000.
Akhri Sidoo kale: 15 Ciyaaraha ugu Fiican ee Android oo leh Taageero Xakamee 2022
Playandwin.co.uk waa website-ka ciyaaraha ugu fiican Boqortooyada Midowday, oo leh ciyaaro bilaash ah iyo fursad aad ku guuleysato abaalmarino lacageed oo dhab ah.
Yatzy, Ludo, Mahjong 3, Pow, iyo ciyaaro kale ayaa diyaar ah. Waxaad sidoo kale ka qaybqaadan kartaa tartanka, waxaad ku ciyaari kartaa lacag dhab ah, oo waxaad yeelan kartaa wakhti fiican.
3. Ciyaaryahanka Ciyaarta Bixiya
Ciyaartoyga Ciyaarta La Bixiyay, waxaad hadda heli kartaa lacag bilaash ah. Waxay u badan tahay sida Swagbucks.
Waxaad haysataa wadar ahaan 600 oo ciyaarood oo aad ka soo xulan karto. Xubnaha ciyaarta ka qaybgalaya ayaa la sheegay inay xaq u leeyihiin abaalmarin lacageed oo dhan $250,000.
Fiiro gaar ah: Intaa waxaa dheer, waxaad la tartami kartaa isticmaalayaasha kale si aad u kasbato lacag dheeraad ah adiga oo qiimeeya ciyaaraha khadka tooska ah, tijaabinta alaabada magaca summadaha, u gudbinta asxaabta, iyo dhamaystirka sahannada.
Waxaa jira laba nooc oo xubinimo ah oo la heli karo. Ku biirista bilaashka ah ama lacagta qaaliga ah, waxaad ciyaari kartaa tiro ciyaarood oo xaddidan.
Markaad noqoto xubin premium, waxaad heli doontaa nooca ciyaarta oo buuxa iyo 2x dheeri ah. Markaad iska diiwaan geliso nooca premium, waxaad sidoo kale heli doontaa 1000 dhibcood.
Ciyaartan cajiibka ah waxay ku abaalmarisaa ciyaartoyda lacag caddaan ah iyo jaakbotyada marka ay ciyaaraan ciyaaraha bingo.
Mid ka mid ah ciyaaraha khamaarka lacagta dhabta ah ee ugu caansan. Waxaa jira in ka badan 300 oo ciyaarood oo la heli karo, si aad u dooran karto oo aad u doorato waxaad rabto. Qaybta ugu fiican ayaa ah in marka aad saxiixdo, aad hesho $25 gunno ah.
Ciyaarta dhaqaalaha dalwaddii lacag dhab ah. Lacagta lagu guuleysto ciyaarta waxaa lagu beddeli karaa lacag dhab ah.
Sidoo kale waa ciyaar lacag-qaadis ah oo caan ah. Master Corporation waa ciyaar imtixaan gelinaysa maamulkaaga iyo xirfadahaaga ganacsi.
Bilaabida ganacsiga, noqoshada maalgeliyaha, iyo shaqaynta maalin kasta waa dhammaan siyaabaha lagu dhalin karo lacag caddaan ah.
Akhri Sidoo kale: Sida Loo Ogaado Haddii Aad Adeegsan Kartid Hadiyadaha GameStop onlayn
MyPoints waxay ku siinaysaa lacag aad ku sameyso waxyaabo ay ka mid yihiin ka jawaabista sahannada iyo daawashada fiidiyowyada. Waxa kale oo aad ciyaari kartaa ciyaaraha bilaashka ah ee internetka oo bixiya lacag dhab ah marka lagu daro hawlahan.
Markaad wax iibsanayso, waxaad isticmaali kartaa MyPoint si aad lacag u badbaadiso. Waxaad ciyaari kartaa ciyaaraha lacag-samaynta, buuxin kartaa sahanka MyPoints, ama waxaad ka jawaabi kartaa su'aalaha ra'yi ururinta ee goobta si aad u kasbato abaalmarino markaad madadaalo leedahay.
XIDHIIDHKA: Runtii Ma Ku Heli Karaa Lacag Fanbox? Faallooyin Daacad ah
Tallaabooyinkan ayaa kaa caawin doona inaad urursato dhibco adoon kaaga baahnayn inaad wax lacag ah isticmaasho.
Waxaad lacag kala bixi kartaa akoonkaaga PayPal (ka dib markaad ciyaareyso ciyaaraha PayPal lacag caddaan ah) ama waxaad dhibcahaaga ku soo furan kartaa kaarar hadiyadeed oo kala duwan oo dukaan ah dhibcaha aad ku kasbato ciyaarista ciyaaraha.
Aaladaha IOS, aaladaha Android, iyo myPoints.com waa dhammaan meelaha aad ka ciyaari karto. Saacaddii, mushaharkeedu wuxuu u dhexeeyaa $2 ilaa $4. PayPal iyo kaadhadhka hadiyadaha labaduba waa ikhtiyaar lacag-bixineed oo bilaash ah.
Swagbucks waa wax ka badan habka kaliya ee lacag lagu kasbado adigoo ciyaaraha online ku ciyaaraya. Marka laga reebo lacag-bixinta aad ku ciyaarto ciyaaraha lacag-samaynta ah, waxay sidoo kale ku siinaysaa inaad sahan sameyso, ka raadiso shabakadda, oo aad daawato filimada.
Dhammaan hawlahan waxay ku kasbadaan "Swagbucks," kuwaas oo ah dhibco abaal-marin. Waxaa jira ciyaaraha xusuusta lacagta dhabta ah iyo ciyaaraha ereyada, iyo sidoo kale ciyaaraha ficil-ku-saleysan.
Swagbucks ama dhibcooyinka la kasbado waxa lagu badalan karaa kaarar hadiyadeed dukaamo kala duwan ama PayPal lacag caddaan ah.
Swagbucks.com, iPhone, Android, iyo Swagbucks.com dhamaantood waa meelo fiican oo lagu ciyaaro. Dakhligu wuxuu u dhexeeyaa $2 ilaa $4 saacaddii.
Inta badan ciyaaraha waa bilaash in la ciyaaro. PayPal iyo kaadhadhka hadiyadaha waxaa loo aqbalaa hababka lacag bixinta. Iyada oo software-kan ciyaarta lacagta caddaanka ah ee bixiya lacag dhab ah iyada oo aan wax dadaal ah, waxaad si fudud u heli kartaa $ 50 ilaa $ 100 bishiiba.
Blitz waa software tartanka ciyaaraha cusub halkaas oo aad ku kasban karto lacag dhab ah marka aad ciyaareyso ciyaaraha sida Solitaire, Bingo, Helix Jump, Ball Blast, Blackjack, Slots, iyo in ka badan!
Tartanka 1v1 ciyaaraha, tartamada, horyaalada todobaadlaha ah, Brawls, iyo habab ciyaar oo badan ayaa dhamaantood diyaar ah!
Blitz waxa ay heshay in ka badan 100,000 oo la soo dejistay tan iyo markii la bilaabay, iyadoo ciyaartoy cusub ay maalin kasta is diiwaan galiyaan.
Blitz waa goob xayeysiis la'aan ah oo ka dhigaysa ciyaaraha tartanka mid qof walba heli karo. Ciyaar maanta oo hel $10 gunno si aad u bilowdo! Blitz IOS waa diyaar si loo soo dejiyo.
Akhri Sidoo kale: Lacag La Siin Si Aad U Ciyaarto Ciyaaraha: Meelaha Ciyaaraha Ugu Fiican
Khayaanada si looga fogaado in la qoomameeyo
Waxaa jira khiyaamo badan oo suuqa ka jira oo loogu talagalay ciyaaraha lacag kugu bixinaya inaad ciyaarto. Ciyaaraha u baahan inaad lacag ku bixiso ka hor inta aanad ka qayb qaadan waa calaamad hubaal ah oo khiyaano ah.
Ciyaarahan waa, ugu fiican, khamaar, iyadoo ciyaartoy aad u yaqaaniin ay u badan tahay inay faa'iido weyn leeyihiin.
Ciyaarahan, waxaad u badan tahay inaad lumiso lacag intii aad samayn lahayd. Xaaladda ugu xun, ciyaarahan ayaa kaa qaadi doona lacagtaada oo waxay ka dhigi doonaan ku dhawaad ​​wax aan macquul ahayn in la kasbado ama lagu bixiyo abaalmarino.
Qaar ka mid ah apps-ka kugu abaalmariya ciyaaraha kale ee aad ku ciyaareyso taleefankaaga waxay isku dayaan inay sidoo kale qaataan macluumaadkaaga.
Raac habka ugu wanaagsan ee amniga oo ka digtoonow wax abka ah oo aad ku rakibto taleefankaaga.
Kahor intaadan rakibin abka, akhri faallooyinka oo kaliya sii marin u hel qalabkaaga runtii lagama maarmaanka u ah.
Ammaan ma tahay in la isticmaalo Apps-kan?
In kasta oo suuqa lacagta lagu ciyaaro ay ka jirto khiyaamo badan, haddana dhammaantood maaha. Apps-ka ku jira liiskan gabi ahaanba waa badbaado in la isticmaalo oo waxay bixiyaan hab madadaalo leh oo lacag lagu kasbado marka ciyaarta la ciyaarayo.
Waa inaad badbaado u ahaataa inaad ciyaarto ciyaaraha iyo lacag haddii aad isticmaasho xukunkaaga ugu fiican oo aad sameyso shaqada guriga ka hor inta aadan rakibin app kasta ama aad siinin marin u helka aaladdaada.
XIDHIIDHKA: Sida Suuqa Facebook-ga Loogu Iibiyo Loona Helo Macaamiil Badan | 2022
Inta lagu ciyaarayo ciyaaraha telefoonkaaga kuma dhigi doono mid hodan ah, waxaa jira xalal yar oo kuu ogolaanaya inaad ku raaxaysato halka sidoo kale inaad lacag heshid.
Ma awoodi doonaan inay beddelaan shaqadaada maalinlaha ah, laakiin waxaa laga yaabaa inay awoodaan inay kaa caawiyaan inaad maalgeliso qado weyn ama ay daboolaan kharashka caadadaada kafeega.
Markaa, ku raaxayso oo samee wax yar oo lacag caddaan ah.
Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshay qoraalkan. Fadlan nagu soo ogeysii sida aad u aragto qeybta hoose.
1. Waa maxay qaabka dakhli ee apps-kan?
Lacagtaas waa in ay ka timaadaa meel haddii app uu bixiyo dadka si ay u ciyaaraan ciyaaraha. Barnaamijyadani waxay dakhli u soo saaraan siyaabo dhowr ah. Soosaarayaasha ciyaarta ee raba isticmaaleyaal badan ciyaarahooda ayaa bixin doona abka noocaan ah.
Appku waxa uu helayaa lacag gudbin ah oo lagugu xidhidhiyo ciyaarahaas, abaalgudkaaguna waa qayb ka mid ah lacagtaas.
2. Barnaamijyadani ma u qalmaan wakhtiga iyo dadaalka?
Xaqiiqdu waxay tahay in apps-ka ugu badan ee lacag ku siiya ciyaaraha aad ku ciyaarto ay ku siiyaan wax yar ama kaliya waxay ku siinayaan fursad yar oo aad ku guulaysato. Haddii lacag samayntu ay tahay yoolkaaga koowaad, abkani waxa laga yaabaa inaanay u qalmin wakhtigaaga.
Ku shaqeynta saacado badan shaqadaada caadiga ah ama bilaabista ganacsi dhinac ah waxay u badan tahay inay faa'iido ka hesho markaad ciyaareyso ciyaarahan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad raadinayso hab aad ku raaxaysato adigoo weli lacag samaynaysa, codsiyadani waxay noqon karaan doorasho aad u fiican.
3. Codsiyadan iyo mareegahani miyay ku habboon yihiin kaarka deynta abaal-marinta?
Haa, waxaa laga yaabaa inaad sida caadiga ah u isticmaashid kaarka deynta abaal-marinaha iyadoo lala kaashanayo abka kuu ogolaanaya inaad lacag ku kasbato iibsiga. Tani waa hab aad u wanaagsan oo aad ku kordhin karto dakhligaaga adigoo laba jibaaraya.
Markaad wax ka iibsatid mid ka mid ah shuraakada abka, waxaad ka heli doontaa dhibco abka ama mareegaha, kaarka deynta ayaa kugu abaalmarin doona cashback, dhibcood, ama mayl.
4. Barnaamijyadan ciyaaraha miyay bixiyaan lacag dhab ah?
Inta badan ciyaarahan waxay ku siinayaan lacag dhab ah oo aad ku beddesho dhibco horay loogu sii diyaariyay ciyaarta.
Inta badan ciyaarahan waxay isticmaalaan nidaamka dhibcaha si ay kuugu abaalmariyaan ka qaybgalka ciyaaraha kala duwan.
5. Waa kuwee ciyaaraha aad ku bixiso PayPal?
Inta badan ciyaaraha liiskan ku jira waxay ku siinayaan lacagta PayPal, taas oo aad si fudud ugu wareejin karto akoonkaaga bangiga isla maalintaas ama maalinta xigta. InboxDollars, Swagbucks, iyo MyPoints ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican ee barnaamijyadan si degdeg ah u bixiya PayPal.
17 Fikradaha Habeenkii Ciyaarta Runtii Waa Madadaalo
17 Kaqeybgalka Cayaaraha Kaadhka ee loogu talagalay labo qof in ay ciyaaraan
IGaming Academy Review: Tababarka Ganacsiga Ciyaaraha
Sida Loo Iibsado GameStop Stock | Talaabada Hagaha Talaabada
Sida Loo Helo Dhimista Khadka Dhamaystiran ee Ardayga ilaa $15 laga dhimay bishan
Intee In le'eg ayuu Dallaaliyaha Amaahda ku Sameeyaa Amaah?
Ka shaqaynta dallaal deyn ah ee warshadaha maaliyadeed waxay noqon kartaa waayo-aragnimo abaal-marin leh. Dulaal guri guri ahaan,…
Dib -u -eegista HSA ee Nool 2022: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Xalaal & Khiyaano | Sida ay u shaqayso
Caafimaadku waa hal dhinac oo muhiim ah oo nolosha ka mid ah oo ay tahay inaynu dhaqaale ahaan xasiloonno si aan u maareyno wakhti kasta. Iyo…
Sideen Ku Sameyn Karaa $ 1000 Degdeg ah? 15 Siyaabood Oo Looga Hortagi Karo Khamaarka 2022 -ka
Lahaanshaha xisaab sabool ah waxay noqon kartaa welwel haddii aad leedahay baahiyo badan oo aad u baahan tahay si aad u dhigato gaar ahaan haddii…
Faallooyinka Viraltrend 2022: Viraltrend ma sharci baa mise waa khiyaano
Lacag samaynta internetka waxay noqotay hab caadi ah oo dakhli abuur loogu sameeyo aduunka oo dhan.Viraltrend. org waa mid…
Sida Loogu Helo Lacag Bilaash Ah Si Dhakhso Ah Adoo Aan Wax Cadaadis Ah Lahayn
Qof kastaa wuxuu rabaa inuu sameeyo lacag caddaan ah oo dheeraad ah oo uu helo lacag bilaash ah halkan iyo halkaas, iyo, dabcan, iyada oo aan ...
15 Barnaamijyada Sonkorta Hooyo ee ugu Fiican 2022 | Ka hel dhumuc iyo taajirnimo
Mommas Sonkorowga ayaa ah kuwa wax ka beddelaya qaar ka mid ah ragga dhallinyarada ah ee adduunka oo dhan! Hase yeeshee, waxay doorbidi doonaan inay ku sii wataan 'sonkorta'…